[Saturday, March 3rd, 18] :: Xukuumadda S/land Oo Ka Hadashay Sababta ay U Hakisay Saldhiga Milatari Ee Imaaraadku ka Dhisanayey Berbera
Hargeysa(RH)Xukuumadda Somaliland ayaa markii u horaysay ka hadashay wararka sheegaya in la hakiyay saldhiga milatari ee dawladda UAE ka waddo magaalada Berbera ee gobalka Saaxil.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo isago ku sugan dalka Imaaraadka Carabta aya ka jawaabay wararka Sheegaya in la joojiyey Saldhiga milatari ee dawladda Imaaraadka Carabtu ka dhisanaysay Magaalada Berbera,ayaa sheegay inaan si rasmi ah loo joojin saldhiga,
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland wuxuuse qiray in maayarka Berbera uu saldhiga u joojiyay inta ay dawladda UAE ka soo jawaabayso nashqad cusub oo ku saabsan dhulka laga dhisayo saldhiga oo ay dawladda Somaliland u gudbisay, ka dib markii sida uu wasiirku sheegay ay dhulkii hore loo siiyay yeesheen dad shacab ah oo la awoodi waayay in magdhow loo celiyo, wuxuuna sheegay inuu maanta kulan la yeelanayo masuuliyiinta UAE oo uu xusay inuu ku rajoweynayahay inay meel isla dhigaan arrintan.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire waxaa uu Hadalkiisa ku Bilaabay “Waxaa igu maqaala ah in si khaldan loo geliyey saxaafadda. Saldhiga markii hore dhul ayaa loo qoondeeyey. Dhulkii qayb ka mid ah waxaa yeeshay dad aad u tiro badan. Waxaa loo baahday in haddii laga qaado dhulkooda loo mag dhabo, laakiin magdhowgii wuxuu noqday waxaan la awoodi karin. Sidaa aawadeed waxaa la soo koobay dhulkii la siiyey, waana loo diray. Waxaa la sugayaana in jawaab ka soo celiyaan. Maayarkuna wuxuu shaqadii ka joojiyey inta ay jawaab laga helaayo si ay deyrka u bilaabaan. Berito ayaanu balansanahay UAE, Insha Allah, waxaan ku rajo weynahayna in aanu meel isla dhigno arrinkaa.” sidaas ayuu wasiirku ku soo koobay hadalkiisa.